Xmoto - GNU / Linux အတွက်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်း။ Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | GNU / Linux များ, အားကစားပြိုင်ပွဲ
ငါတစ်နေ့ကစားခြင်းကိုဖြုန်းတီးသောသူတို့ထဲမှတစ် ဦး မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မိနစ်အနည်းငယ်အကုန်ရှင်းလင်းရန်အချိန်များစွာရှိသည် (နှင့်ပင်နာရီ) ကျွန်တော်တပ်ဆင်နိုင်သည့်အချို့သောဂိမ်းများကို GNU / Linux များ.
သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် XMotoယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းပါဝင်တဲ့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခု ရော်ဘာအပြော တစ်ခုကျော် မင်္ဂလာပါ အလွန်လွယ်ကူသောမှမဖြစ်နိုင်ဖို့သွားကြောင်းအဆင့်ဆင့်၌တည်၏။ ဒီဂိမ်းထဲမှာ configuration options အတော်များများရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော Records ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိရန်မှာကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအရာဝတ္ထုအမြောက်အများကိုအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကာလအတွင်းစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ငါဆိုလိုတာကအိမ်မှာစာရေးဖို့ဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုယုံပါ။ Engancha !!!
ဒီ post ကိုစလိုက်တဲ့ပုံမှာနောက်ဘက်ရာဘာကိုသုံးဖို့နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းအားဖြင့် bur ဆီကိုငါရောက်နေတယ်။ 😀
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Xmoto - GNU / Linux အတွက်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်း
တက်ချိတ်? ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်သက်သေမပြနိုင်လို့စွဲသွားတယ်
Regnum Online ကို have အာဂျင်တီးနား MMORPG တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းမှာအကောင်းဆုံးမှာ Kingdom နှင့် Kingdom ရန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါယခုရှိသည်တစ်ခုတည်းသောဂိမ်း။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Xmoto သည်အနည်းငယ်ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်လာသည်။
ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမမှတ်မိပါ။ (ms-dos မှ "Prince"၊ "Mario" 1 နှင့် 3၊ Snes မှ "Zelda ocarina of time"၊ Snes မှ "Crash", "Alice-McGee -" နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏စာရင်းကိုပိတ်ရန်နီးပါးနီးပါးရှိခဲ့သည်။ ) "," Angrybirds "," Secret Maryo Chronicles "," Hedgewars "နှင့်ငါလွဲချော်ခဲ့ဖူးသောအချို့ဖြစ်သော်လည်း Xmoto သည်ထိုစာရင်းတွင်ပါဝင်ရန်နီးစပ်ခဲ့သည် ငါစံချိန်တင်ငါ3ရက်သာကြာမြင့်သောအခြေအနေတွေထဲကတစ်ခုမှာစံချိန်တင်အောင်မြင်ခဲ့, သတိရပါ ဒါပေမယ့်ငါဖြတ်သန်းသွားတဲ့သူအများစုကငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ထို့အပြင်အလွန်များပြားလှသောအခြေအနေများ (အခါအားလျော်စွာထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းများ) ရှိသည့်အတွက်၎င်းကိုဖြတ်သန်းရန်ပင်ကြိုးစားရန်မလိုပါ။
Hahahaha .. သင်ယုတ္တိဗေဒကိုအသုံးချရမည့်အခြေအနေအချို့ရှိသည်။ သို့သော်အခြားသူများတွင်ယင်းကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်အောင်မြင်အောင်ပင်စီမံနိုင်ခြင်းမရှိချေ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိပေမယ့်မဖြစ်နိုင်သလောက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကတော့ -
(က) စက်ဘီးကိုအပြောင်းအလဲမရှိဘဲ ၂၇.၀၀၁၃ º (ja) ၌မြေကြီးပေါ်တွင်စက္ကန့်များစွာနှင့်စက္ကန့်များစွာအကြာတွင်“ taur” လက်ချောင်းများနှင့်စန္ဒရားကီးဘုတ် (ja) လိုအပ်သောသူများ၊
(ခ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ပရမ်းပတာဖြစ်မှုနှင့်မတရားလှုပ်ရှားမှုအားပထမ ဦး ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ပုံရပြီး (ထပ်တူအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ထပ်မံ၍ မရပါ) ထို့နောက်သူတို့သည်စင်မြင့်၏ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတားအဆီးများကိုဟက်တာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။